DigitalGlue သည်အကြီးစားပြည့်စုံသောစာချုပ်အသစ်သုံးခုကိုအနိုင်ရရှိခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » DigitalGlue သုံးနယူးအကြီးစား-Scale ကိုပြည့်စုံစာချုပ်များဆွတ်ခူး
ဦးဆောင်ထုတ်လွှင့်ဖြေရှင်းနည်း Integrated တစ်ဗိုလ်မှူးကွန်ယက်, EstrellaTV နှင့် Fortune မဂ္ဂဇင်း 500 ဘဏ္ဍာရေး Institution မှမှာဖြန့်ကျက်မှုအတွက်အွန်လိုင်းအရောင်းနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးန်ဆောင်မှုများ Perform မူမည်
Laguna NIGUEL, ကာလီဖိုးနီးယား - ။ အောက်တိုဘာ 28, 2014 - DigitalGlue, ဒစ်ဂျစ်တယ်ဗီဒီယိုကိုအကြောင်းအရာဖြန့်ဖြူးဘို့ပြည့်စုံဖြေရှင်းချက်ပေးထားတဲ့စက်မှုလုပ်ငန်း-ဦးဆောင် System Integration, ယနေ့ကသုံးအကြီးစားပြည့်စုံချက်စာချုပ်များကိုချီးမြှင့်ကြောင်းကြေညာခဲ့သည်။ DigitalGlue အဓိက multiplatform ဗီဒီယိုနှင့်ဂီတကွန်ရက်က, စပိနျရုပ်မြင်သံကြားကွန်ယက်ကို EstrellaTV များအတွက်ဟာ့ဒ်ဝဲ, ကြိုတင်ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ထားသောနှင့်ထောက်ခံမှုပေးသွားမှာပါနှင့် ဂြိုဟ်တု တစ်ဦး Fortune မဂ္ဂဇင်း 500 ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းအတွက်အဆုံးအသုံးပြုမှုအတွက်ကုမ္ပဏီ Microspace ထုတ်လွှင့်။
DigitalGlue configure ထိရောက်စွာအသုံးချနိုင်ရန်အဓိက network တို့ကကန်ထရိုက်ခဲ့သည် သဟဇာတ Affiliate ထုတ်လွှင့်စခန်းများနှင့်ကေဘယ်လ်ကြိုး headends ဖြတ်ပြီးတစ်ဦးတပ်ဆင်ခများအတွက် PVR-8100 အသံဖမ်း။ EstrellaTV, ဝယ်ယူ Liberman အသံလွှင့်ကပိုင်ဆိုင်စပိန်ရုပ်မြင်သံကြားကွန်ယက်ကို, သဟဇာတ ကွန်ယက်ကိုဖြန့်ကျက်မှုအတွက်သူ့ရဲ့ပွညျ့စုံဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူ DigitalGlue ထံမှ PVR-8100 အသံဖမ်း။ Microspace ဆက်သွယ်ရေးတစ်ဦးက၎င်း၏ Raleigh, မြောက်ကာရိုလိုင်းနား headend များအတွက် Verimatrix encryption ကိုစနစ်, အဖြစ်က၎င်း၏ဖောက်သည်များထဲမှတစ်ဦး Fortune မဂ္ဂဇင်း 500 ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများအတွက် End-user ပစ္စည်းကိရိယာများ Configuration နဲ့ multisite ပထမဆုံးအကြိမ်ထုတ်ဝေရောင်းချခြင်းတို့အတွက်ပေါင်းစည်းမှုန်ဆောင်မှုများဝယ်ယူခြင်းနှင့်ပေါင်းစည်းမှုများအတွက် DigitalGlue ကန်ထရိုက်သိရသည်။
"ဒီသစ်ကိုအကြီးစားပြည့်စုံချက်စာချုပ်များကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုများနှင့်စွမ်းရည် headend မှာအကောင်းဆုံး-of ဖောက်ထုတ်လုပ်သူနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်, ဒါပေမယ့်တစ်ခု Network တစ်ခုလုံးတစ်လျှောက်လုံးပစ္စည်းကိရိယာများကိုထုတ်လှိမ့်မှလိုအပ်သောထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနှင့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုန်ဆောင်မှုများကိုသာရောင်ပြန်ဟပ်," ဟုပြောသည် Sean မတ်ဘတ်စ်ဘီကိုင်တွယ်, DigitalGlue ဥက္ကဋ္ဌ။ "ဒီဝန်ဆောင်မှုများကိုသာစိတ်ကြိုက်ပေးကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းရည်ကို, အွန်လိုင်းဗီဒီယိုလေ့ကျင့်ရေးနေဖြင့်တိုးမြှင့်နေကြသည်; ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည် '' အတိအကျလိုအပ်ချက်များဒဏ်ငွေ-ညှိ Workflows ဖို့အတွက်အိမ်သူအိမ်သား software ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး, ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုနဲ့တစ်ဦးဌန်။ "
Networkwide နှင့် Affiliate-တိကျတဲ့လက်ခံဖွဲ့စည်းမှုပုံစံအဖြစ်အပြည့်အဝစမ်းသပ်ခြင်း, Murrieta ကယ်လီဖိုးနီးယားအတွက်ကုမ္ပဏီ၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုနှင့်အင်ဂျင်နီယာစက်ရုံမှာ DigitalGlue ရဲ့အင်ဂျင်နီယာများကလုပ်ဆောင်နေကြသည်။ အဆိုပါအဖွဲ့သည်အသုံးပြုသူများကိုအဆုံးသတ်ကြိုတင်တင်ပို့ဖို့အားလုံးကိုအစိတ်အပိုင်းများနှင့်ယူနစ်ခြေရာခံခြင်းသတင်းအချက်အလက်ပေါင်းစပ်ပါလိမ့်မယ်။ DigitalGlue installation လုပ်ငန်းစဉ်ကိုကူညီမယ့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုန်ထမ်းများနှင့်အမှားခြင်း simulation နှင့်ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းအဘို့အပြည့်အဝဓာတ်ခွဲခန်းရှိပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီလည်းတခု Affiliate အရောင်းနှင့်ထောက်ခံမှုက်ဘ်ဆိုက်ပေးထားပါတယ်။ အဆိုပါ DigitalGlue အသင်းအဓိကကွန်ယက်ဆင့် 1-3 ထောက်ခံမှုပေးနှင့် Microspace ဘို့တတိယဆင့်ထောက်ခံမှုဖြစ်ပါတယ်။
DigitalGlue နှင့်၎င်း၏ဝန်ဆောင်မှုများသည်အကြောင်းကိုပိုမိုသိရှိလိုပါကမှာတွေ့နိုင်ပါသည် www.digitalglue.com.
အလှူငွေ, postproduction, ဖြန့်ဖြူး, ထုတ်လွှင့်, cable နဲ့ streaming များ - DigitalGlue ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုတစ်ခုစက်မှုလုပ်ငန်း-ဦးဆောင် System Integration ဒစ်ဂျစ်တယ်ဗီဒီယိုဖြစ်ပါသည်။ In-အိမ် coupled အတွေ့အကြုံကိုဆယ်စုနှစ်များစွာ, ကျွမ်းကျင်သူ software ကိုဖှံ့ဖွိုးတိုးတစွမ်းရည်ကုမ္ပဏီအဖြစ်မှန်သို့မဆို concept ကိုဖွင့်ဖို့တပ်ဆင်။ Top-of-the-line ကိုစံချိန်စံညွှန်းများဖွင့်လှစ်ဖို့အပျနှံထုတ်လုပ်သူများနှင့်မြင့်မားသောကျွမ်းကျင်အင်ဂျင်နီယာများအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နှင့်အတူနှစ်ရှည်လများဆက်ဆံရေးအနာဂတ်ကာလတခုတခုအပေါ်မှာမျက်စိနှင့်အတူယနေ့နည်းပညာနှင့်အတူထုံးစံဖြေရှင်းနည်းများကိုဖန်တီးရန် DigitalGlue enable ။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များမှာရရှိနိုင် www.digitalglue.com.
အသံလွှင်း အကြောင်းအရာ DigitalGlue EstrellaTV သဟဇာတ 2014-10-30
ယခင်: စျေးသက်သာ high-end တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှုများအတွက် broadcast Pix ကြေညာချက်များအားကစား Bundle ကို
နောက်တစ်ခု: ဗီတာမင်ရုပ်ပုံများ Knott ရဲ့ကြောက်စရာလယ်ယာများအတွက်ထိတ်လန့်ရလာဒ်တွေတင်